အကောင်းဆုံးသတ္တုတံဆိပ်နံပါတ်ပြားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုံးစံသတ္တုနံပါတ်ပြားထုတ်လုပ်ခြင်း | အဲလစ်
အရည်အသွေးမြင့်တံဆိပ်ကိုဖော်ပြသောထုတ်လုပ်သူများ OEM0န်ဆောင်မှုများကိုဖော်ပြထားသည်
ယူအေအေစိတ်ကြိုက်မှသုံးစွဲသူများသည် 50000pcs အလူမီနီယမ်အလွိုင်နီအယ်စုံအမည်များကို US Alice တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှဖောက်သည်တစ် ဦး သည် PCs 50,000 အလူမီနီယမ်အလွိုင်အယ်လ်အလွိုင်းအမည်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ကြသည်။0ယ်ယူသူကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးသူ့နာမည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမှုတွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်။ Allot AnnsPlate ပမာဏကိုထုတ်လုပ်ထားသည်။ သူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုနှင့်ယုံကြည်မှုအတွက်ဖောက်သည်များကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အကယ်. Faux SheShskin Limpshade သည်အဝါရောင် Alice ကိုလှည့်ပါကဘာလုပ်ရမည်နည်း
Faux SheShskin Limblade သည်အဝါရောင်လှည့်ပါကကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သနည်း။ ဒီနေရာမှာသင့်ကိုကူညီဖို့နည်းလမ်းအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။1. ဆာလဖာဖာထွေးနှင့်အတူအရောင်ချွတ်။ တစ် ဦး ဖြီးနှင့်အတူပွတ်တိုက်။2. အိမ်တွင်ဆေးလိပ်သောက်ခန်းတစ်ခုဖွင့်ပါ။3. Professional Lawshade ထုတ်လုပ်သူများ။ ယေဘုယျအားဖြင့်မီးလိုက်မီးလုံးတွင်သန့်ရှင်းရေးအတွက်အထူးရေနံရှိသည်။ သင်ဝယ်ယူခဲ့သောထုတ်လုပ်သူမှတိုက်ရိုက်0ယ်နိုင်သည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံမှ0ယ်ယူသူတစ် ဦး သည်အသံဖန်တီးခဲ့သော PCS အလူမီနီယမ်အလွိုင်အယ်လ်အယ်လ်အလွိုင်းနာမည်ပေါင်း 60,000 ကျော်ကို US-Ali သို့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခဲ့သည်
ဂျာမနီနိုင်ငံမှ0ယ်ယူသူသည်အသံထုတ်လုပ်သော PCS အလူမီနီယမ်အလွိုင်အယ်လ်အယ်လ်အယ်လ်စကားလုံးများကို PCS 60,000 ကျော်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်သည်။ ယနေ့တွင်ဖောက်သည်များ၏နာမည်များကိုဂျာမနီအားအသုတ်ဖြင့်ဖြန့်ဝေထားသည်။ ဤသည်မှာဂျာမန်ဖောက်သည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်သည်။ သင်၏ထောက်ခံမှုနှင့်ယုံကြည်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ပလပ်စတစ် Lambade-Alice ၏အဝါရောင်နှင့်မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်နည်း
မိသားစုတိုင်းသည်အလင်းရောင်အမျိုးမျိုးကိုတပ်ဆင်ပါလိမ့်မည်။ အလင်းရောင်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလှဆင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန်အတွက်မီးခွက်မှမီးခွက်မှလည်းကာကွယ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းသည်သဘာဝပင်ဖြစ်သည်။ မီးရှို့မှုကိုသန့်ရှင်းစွာသန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်သည်။ မီးခွက်များအတွက်ပစ္စည်းများအတွက်ပစ္စည်းများအများအပြားရှိသည်။ ပလပ်စတစ်မီးခွက်လောဘတ်သည်သူတို့ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုပြီးနောက်လူတို့သည်အဝါရောင်လှည့်လာကြောင်းတွေ့ရှိနိုင်သည်။
Limblade-Alice ပတ်ပတ်လည်0ယ်ခြင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများမှာအဘယ်နည်း
မီးခွက်ပတ်ပတ်လည်တွင်0ယ်ယူရန်အတွက်လူတိုင်းသည်ပုံမှန်စျေးကွက်တွင်0ယ်ယူမှုကိုဂရုပြုရန်, ထုတ်ကုန်၏အသွင်အပြင်နှင့်အရွယ်အစားကိုဂရုပြုရန်နှင့်မိသားစု၏အလှဆင်ခြင်းနှင့်အညီရွေးချယ်ရန်အကြံပြုသည်။ အထက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် Limblad နှင့် LimKhade ပတ်0န်းကျင်၏0ယ်ယူမှုစွမ်းရည်ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသင့်တော်သောအရွယ်အစားမီးလိုက်မီးခွက်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
မြို့ပတ်ရထားလက္ခီခ်ျကိုတပ်ဆင်စဉ်အတွင်းတိုးချဲ့ခြင်းသော့ခလောက်များကိုပြုပြင်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ တိုးချဲ့ခြင်းသော့ခလောက်များ၏နံပါတ်နှင့်အရွယ်အစားကိုမြို့ပတ်ရထားမျက်နှာကျက်မီးခွက်၏စတိုင်နှင့်အရွယ်အစားအတိုင်းဆုံးဖြတ်သည်။ မြို့ပတ်ရထားမျက်နှာကျက်မီးခွက်ကိုအစားထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်မီးသီးကိုအစားထိုးခြင်းတွင်မလိုအပ်သောပြ problems နာများကိုထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်သည်။
ပေါင်းစည်းထားသောမျက်နှာကျက်မီးတိုင်အရိပ် -Ale များကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း
ဘက်ပေါင်းစုံမျက်နှာကျက်ပြီးဆုံးသွားသောအခါအိမ်မီးအိမ်များ၏အလှဆင်ပစ္စည်းများကိုထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ပေါင်းစပ်မျက်နှာကျက်မီးခွက်သည်ဘုံရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့နောက်မျက်နှာကျက်ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်အမှားတစ်ခုရှိလျှင်,
ပေါင်းစပ်ထားသောမျက်နှာကျက်မီးတိုင်အရိပ်တပ်ဆင်နည်း - အဲလစ်
1. အိမ်တွင်း၌ပေါင်းစပ်ထားသောမျက်နှာကျက်မီးများကိုထည့်သွင်းရန်သင်ပထမ ဦး ဆုံးတည်နေရာကိုရွေးချယ်ရမည်။ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်အကြံပြုသည်။2. and ည့်ခန်းနံရံ၏အရည်အသွေးကိုပေါင်းစပ်ထားသောမျက်နှာကျက်အလင်းကိုတပ်ဆင်စဉ်အတွင်းနံရံနှင့်နံရံကိုအခွံမကြည့်နိုင်အောင်စစ်ဆေးရန်။3. ပေါင်းစည်းထားသောမျက်နှာကျက်အလင်းကိုတပ်ဆင်ထားသည့်နေရာ၏မျက်နှာကျက်အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးပါ။ အကယ်. ၎င်းသည်လုံခြုံမှုမရှိဟုသင်ခံစားရပါက, အလင်းသံမဏိနဂါးအရိုးစုကိုမျက်နှာကျက်အပေါ်အကာအကွယ်ပေးသည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။
Limpshade နှင့်မျက်နှာကျက် - အဲလစ်ကိုမည်သို့ဖြိုဖျက်နည်း
ကောင်းသောအလင်းရောင်သည်အိမ်အလှဆင်တွင်အိမ်အလှဆင်ခြင်း၏စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ အိမ်အလှဆင်တွင်အလင်းရောင်ရွေးချယ်မှုသည်အရေးကြီးလာသည်။ မျက်နှာကျက်ကိုရွေးချယ်ခြင်း၏အဓိကအချက်မှာ၎င်းသည်တပ်ဆင်ရန်နှင့်ဖြုတ်ရန်လွယ်ကူခြင်းရှိမရှိကိုကြည့်ရန်မှာ၎င်းကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူခြင်းရှိမရှိကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမည်။ နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၎င်းသည်ပြ trouble နာများစွာကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။ နောင်တွင်ပြန်လည်အစားထိုးရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်။
လှည့်ပတ်နေသောမြို့ပတ်ရထားမီးခွက် -lice ၏လှည့်ထားသော LampShade ကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း
အလျင်အမြန်မျက်နှာကျက်ကိုမီးလိုက်ခြင်းဖြင့်မီးလိုက်ခြင်းဖြင့်ဖွင့်ထားသည်။ စတုရန်းအမျိုးအစားယေဘုယျအားဖြင့် buckle ကိုအသုံးပြုသည်; အတွင်းပိုင်းတွင်းသုံးပေါက်များဖြင့်ညှပ်ထားသောဖန်ခွက်မီးခွက်တစ်ကောင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မီးလိုက်မီးကိုဆွဲချရမည်။ မျက်နှာကျက်တွင်ကပ်ထားသည့်မျက်နှာကျက်မီးခွက်အချို့နှင့်မျက်နှာကျက် gusset ကို၎င်းကိုအစားထိုးရန်ဖယ်ရှားရမည်။ မီးနှင့်စမ်းရေတွင်းတကောင်ကို၎င်း, လက်ဖြင့်ကိုင်။ စမ်းရေတွင်းကိုထုတ်လော့။
မျက်နှာကျက် - အဲလစ်အပေါ်မီးခွက်ကိုဖယ်ရှားနည်း
အလင်းရောင်သည်ပရိဘောဂများတွင်မျက်စိဖြစ်သည်။ အိမ်အလှဆင်တွင်မီးခွက်များ၏အခန်းကဏ္ is သည်အလင်းရောင်အတွက်သာကန့်သတ်ထားရုံသာမကအလှဆင်ထားသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ0င်သည်။
မီးခွက်များနှင့်မီးအိမ်များကိုရွေးချယ်ရာတွင်လူတိုင်းသည်မီးအိမ်ကြီးများကို ဦး စွာကြည့်ကြလိမ့်မည်, area ရိယာ၏သေးငယ်သောမီးခွက်များသည်အလွန်ကြီးမားသော်လည်း၎င်းတို့၏အလင်းရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအိမ်တွင်အသုံးပြုသောကြောင့်ပိုမိုသင့်တော်သည်။